I-Fluxbox, i-FLWM, i-FVWM, i-Haze ne-Herbstluftwm: ama-WM angama-5 we-Linux | Kusuka kuLinux
Namuhla sizoqhubeka nesethu okuthunyelwe kwesine smayelana Abaphathi bamawindi (Abaphathi beWindows - WM, ngesiNgisi), lapho sizobuyekeza khona 5 ngaphezulu kwabo, kusuka kuhlu lwethu lwe 50 okuxoxwe ngaphambilini.
Ukuze uqhubeke wazi izinto ezibalulekile zazo, njengokuthi, ingabe zikhona noma cha amaphrojekthi asebenzayo, ukuthi Uhlobo lwe-WM yibo, okungokwabo izici eziphambili, futhi zifakwa kanjani, phakathi kwezinye izici.
“UFluxbox ungumphathi wamawindi weX ngokuya ngekhodi leBlackbox 0.61.1. Kukhanya kakhulu kwizinsizakusebenza futhi kulula ukuphatha kepha kusalindwe ngezici zokwenza isipiliyoni sedeskithophu sibe lula futhi sisheshe ngokweqile. Yakhiwe kusetshenziswa i-C ++ futhi inelayisense ngaphansi kwelayisense ye-MIT".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe iminyaka engu-4.
Inikeza ifayili lesicelo elinamandla (i-apps-file) lapho kungenzeka khona ukusetha amapharamitha athile wezinhlelo zokusebenza (windows), njengobukhulu, umhlobiso, indawo yokusebenza ezenzakalelayo yokuvula, ukunamathela nokunye okuningi. Ivumela ukuphatha cishe yonke imingcele yanoma iliphi iwindi noma uhlelo lokusebenza.
Inefayela lokhiye elihambisanayo (okhiye-ifayela) elihlinzeka lula kubantu abangenalo igundane futhi elenza umsebenzi ukhululeke kakhudlwana kubo bonke abasebenzisi, ngoba ivumela ukumisa ifayela lokhiye elifanele elisiza ukulawula cishe yonke into, likwenza kusheshe kakhulu kunokusebenzisa imenyu enokhiye kuphela, inhlanganisela yokhiye namafobs okhiye.
Inikezela ngokuhlelwa okuhle kakhulu okukuvumela ukuthi ubeke amafasitela ndawonye. Futhi lesi sici singahlanganiswa nesici se- "auto-grouping" esinikezwe ngokufaka kungobo yomlando yezinhlelo zokusebenza, evumela izinhlelo ezithile ukuthi zenziwe amathebhu ndawonye ngokuzenzakalela.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- Iphakethe le- "fluxbox"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
“Imenenja yewindi eyenziwe nguBill Spitzak ngenhloso yokuhlanganisa imibono emihle kakhulu yamanye ama-WM akhona kusetshenziswa i-wm2 codebase, eyenziwe nguChris Cannam".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe iminyaka engu-5.
Izama ukuthatha isikhala esincane sesikrini ngangokunokwenzeka, futhi iyikhodi encane futhi esheshayo impela.
Inikeza izinkinobho ezizimele zokukhulisa ububanzi nobude. Inebha yomsebenzi kanye nemenyu yokuqala. Ivumela ukushintshwa kwewindi ngokusebenzisa inhlanganisela yokhiye be- «Alt +», isekela amadeski amaningi. Ngaphezu kwalokho, "iphaneli" kanye "nemenyu yokuqala" kuhlanganisiwe kwenziwa imenyu eyodwa ye-pop-up engathathi sikhala lapho ingasetshenziswa.
Idizayinelwe ukusebenza ngamawindi amancane kakhulu futhi egqagqene, ukuze izinhlelo ekugcineni zikwazi ukusizakala ngamawindi amaningi, kunokuba ziphoqelelwe ukwenza iwindi elilodwa "mdi" elilodwa. Okokugcina, iyahambisana ngezinga elithile neMotif WM, KDE, neGnome, futhi isebenza nezinhlelo ze-SGI ezithatha i-4DWM.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakethe "flwm"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
"NOMAn imenenja yewindi ebonakalayo yohlelo lwewindi le-X. Ekuqaleni kwakuyimfoloko ebuthakathaka ye-TWM eyabonwa nguRobert Nation ngonyaka we-1993, esivele yaba umphathi wewindi omuhle, omuhle, odumile futhi oguquguqukayo namuhla".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe ngaphansi kweminyaka engu-4 edlule.
Okwamanje inenguqulo ezinzile (endala: 2.6) nenguqulo yokuthuthukisa (ikusasa: 3.0). Ngaphezu kwalokho, ihambisana nezinga le-ICCCM futhi iyalungiswa kakhulu.
Ivumela, kusuka ekucushweni okuncane, ukuthi kulungiselelwe ngamathuluzi angaphakathi nesoftware yomuntu wesithathu ukwenza ngezifiso izici eziningi zedeskithophu. Ngenxa yalokho, lapho kuhlanganiswa nesoftware yomuntu wesithathu nemibhalo yangokwezifiso, iba ithuluzi elinamandla lokwakha indawo ephelele yedeskithophu.
Uhlobo lwayo lwesikhathi esizayo ekuthuthukisweni luyimenenja enkulu yewindows yedeskithophu, ekuqaleni etholakala ku-TWM. Futhi kuhloselwe ukuba nengqophamlando yokukhumbula okuncane kanye neqoqo lezici ezicebile, njengokuzenzela ngezifiso ngokwedlulele nokwelula, nokuba nezinga eliphakeme lokuhambisana kwe-Motif (MWM).
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- iphakheji "fvwm"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
“Umphathi wewindows ogqekeziwe osuselwe ku-MLVWM (Macintosh Like Virtual Window Manager), i-WM enhle evela kuTakac Hasegawa (hase@rop2.hitachi-cable.co.jp) ngokubukeka kweMacOS. I-MLVWM ibisuselwa ku-TWM naku-FVWM".
Iphrojekthi engasebenzi: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe iminyaka engu-5.
Igcina ubuningi besici se- I-MLVWM, ngakho-ke kufanele ihambisane kakhulu nayo. Futhi inamandla, isebenza kahle futhi ayisindi.
Inikezela ngamadeskithophu amaningi abonakalayo, i-Menu Bar elungisekayo, iWindows Shaded, iWindows ilawulwa kusuka kubha yemenyu. Konke kucezu olulodwa lwekhodi.
Isici sokufuna ukwazi seHaZe, naso esivela ku-MLVWM futhi ngokusobala esiphefumulelwe yi-Mac OS, amabhaluni wombhalo, okuwo, anqunyelwe ekuboniseni imininingwane ngewindi igundane elikhomba kulo.
"Imenenja yewindi yohlobo lweTiling yeX11 isebenzisa iXlib".
Iphrojekthi esebenzayo: Umsebenzi wokugcina utholwe cishe izinyanga eziyi-2.
Ivumela ukuphatha okulula nokulungiswa okuhle ngenkathi isebenza kusuka kulayini womyalo, hot (bukhoma).
Inikeza ukuhlanganiswa okumangazayo kohlelo lokusebenza lokuthayela okuzenzakalelayo nolwenziwa ngesandla, okwenza ukuthi noma yimuphi umsebenzisi amise ukuthayipha okuzenzakalelayo kohlelo lokusebenza ngalunye noma aguqule noma yiluphi uhlelo lokusebenza kusuka kokuzenzakalela kuya kokuthayipha ngesandla.
Sebenzisa iskripthi se-bash ukumisa okulula. Kuzimele ezahlukahlukene, umsebenzisi angasebenzisa ukwakheka okuhlukile, futhi angenza ngezifiso izakhiwo endizeni ngokusho kokuthanda kwazo. Ngaphezu kwalokho, iphinde inikeze ukusekelwa kwama-multi-monitor, ngakho-ke awuphoqelekile ukusebenzisa i-monitor eyodwa.
Le WM ebuyekeziwe ivame ukutholakala ezinqolobaneni eziningi ezihlukile I-GNU / Linux Distros, ngaphansi kwegama le- Iphakethe le- "herbstluftwm"Ngakho-ke, kuya ngomphathi wephakeji osetshenzisiwe, wokuqhafaza noma wokugcina, ingafakwa kalula. Imininingwane engaphezulu ngale WM ingatholakala kokulandelayo isixhumanisi.
Siyethemba lokhu "okuthunyelwe okuwusizo okuncane" mayelana nalezi ezi-5 ezilandelayo «Gestores de Ventanas», ezimele kunoma iyiphi «Entorno de Escritorio»ubizile I-Fluxbox, i-FLWM, i-FVWM, iHaze neHerbstluftwm, yiba nentshisekelo nokusetshenziswa okuhle, kwayo yonke «Comunidad de Software Libre y Código Abierto» kanye negalelo elikhulu ekusabalalisweni kwemvelo emangalisayo, enkulu futhi ekhulayo yezicelo ze «GNU/Linux».
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » I-Fluxbox, i-FLWM, i-FVWM, i-Haze ne-Herbstluftwm: ama-WMs amanye ama-5 we-Linux
umsebenzisi ongenelisekile kusho
Ekugcineni nginqume ukufaka okufakiwe kwale «saga» yezinye abaphathi bedeskithophu, futhi ngithanda ukufaka into eyodwa: kungakuhle uma bengeze isithombe-skrini, kungaba se-google, devianart noma kumawebhusayithi abo, ukusinika umbono wokuthi la ma-WM abukeka kanjani. Kunezikhathi lapho umbhalo uwodwa uvame ukunganeli ukukholisa
Phendula kumsebenzisi ongajabule
Ngiyabingelela sithandwa futhi ngiyabonga ngokuphawula kwakho. Impela isithombe esisodwa se-WM ngayinye besingaba sihle kakhulu, kepha njengoba kukhona ama-WM ama-5 kokuthunyelwe ngakunye, lokho kungenza okuqukethwe kubukeke kubanzi kakhulu, kulokhu okuthunyelwe osekuvele kukude kunokujwayelekile. Kodwa-ke, njengoba usushilo, kumawebhusayithi amaningi asemthethweni kukhona izithombe-skrini zazo, futhi izixhumanisi ziyatholakala ngokuchofoza ezihlokweni zamagama ze-WM ngayinye. Mhlawumbe, ngokuhamba kwesikhathi sizokwenza okuthunyelwe mayelana ne-WM ngayinye esebenzayo ngamathiphu ayo wokufaka nokucushwa ngezithombe-skrini zawo.
UMatías M. kusho
"Saga" enhle kakhulu lokhu okuthunyelwe. Bengilokhu ngibalandela selokhu baqala. Ngilinde abanye 🙂
Njengamanje ngiku-i3, futhi kuhle kakhulu.
Phendula uMatías M.
Sanibonani Matías! Ngiyabonga ngamazwana akho amahle ngezindatshana ezihlobene nabaphathi bamawindi (WMs). Sesivele sishicilele leyo equkethe i-I3-WM, singathanda ukufaka imininingwane ethe xaxa kepha njengoba kukhona okungu-5 ngeposi ngalinye, okubalulekile kanye nezixhumanisi ezihambisanayo kuyabekwa. Kujabulele.
IKdenlive 20.08 ifika nezindawo zokusebenza ezintsha nokuningi